Wararka - Sida loo waafajiyo midabka mesh birta ee qurxinta leh ee qaabka guud ee qolka
Iyadoo horumarinta joogtada ah ee fikradda qurxinta dadka, raadinta midabaynta midabka ee mesh birta ah ee qurxinta ayaa sidoo kale la kordhiyay. Qurxinta guriga hadda ma ahan midab iftiin leh. Alaabta mesh birta ee qurxinta leh ee dhalaalaya ayaa noo suurtagelinaysa inaan u qurxinno xafiiska si qumman oo habboon. Si kastaba ha noqotee, haddii midabka midabku aanu fiicnayn, sidoo kale waa mamnuucida qurxinta. Isku-duubnidu maaha mid wanaagsan, laakiin ma laha saameyn qurux badan. Waxay u egtahay mid fool xun. Aynu soo bandhigno xirfadaha is-waafajinta midabka ee daahyada mesh birta marar kala duwan!
Midabka isku midka ah ee mesh birta ah ee qurxinta ayaa si toos ah u saameeya qeexida qolka. Meelaha leh meelo waaweyn sida derbiga, dhulka iyo saqafka, waxay ku habboon tahay in la isticmaalo mesh qurxinta birta ah ee khafiifka ah iyo mesh qurxinta wareega ah sida codka hoose, gaar ahaan saqafka. Haddii midabyo badan oo madow la isticmaalo, waxay dadka siin doontaa dareen murugo iyo culeys. Waxaad ku dhejin kartaa saqafka sare ee wax yar oo laambado ah (sida faynuusyada yaryar ee la sudhay inta lagu jiro xafladda) Farqiga u dhexeeya gidaarka iyo saqafka ayaa ah mid dhalaalaya oo firfircoon. Midabada sida daahyada birta ah iyo daahyada mesh qaybta qaybinta birta ayaa ah codka qolka, kaas oo samayn kara si fiican u dhigma derbiga.
Midabka qolka shirarka iyo qolka soo dhaweynta macaamiisha ayaa ah inta badan cod qabow, taas oo ah mid dhab ah oo siinaysa macaamiisha dareen nidaam, xirfad iyo masuuliyad. Mesh qurxinta birta ah ee khafiifka ah ee midabaysan ayaa ku habboon darbiga, oo leh dhalaal midab sare leh. Waxay balaadhi kartaa fikirka dadka marka lagu daro miiska shaaha ee mugdiga ah. Midabada sida caadiga ah loo isticmaalo waa madow, qaxwo, cawl khafiif ah, aluminium alloy midabka aasaasiga ah, midabka aasaasiga ah ee birta ah, qalin dhalaalaya, iwm.
Makhaayadaha sare waa inay ahaadaan midabyo diirran ama dhexdhexaad ah, iyo dharka miiska ee dhalaalaya waxay kor u qaadi karaan rabitaanka cuntada dadka. Inta badan la isticmaalo, sida jaalaha dahabka ah, midabka dahabka ah, orange-ka, iwm. Goobaha madadaalada ayaa ah meelaha ugu nasashada badan ee dadka. Guud ahaan waxay isticmaalaan midabyo dhalaalaya iyo midabyo diirran, iyagoo siinaya dadka jawi xamaasad iyo jacayl leh. Inta badan canabka guduudan, dahab, naxaas, casaan shiinees ah, cas mahogany, iwm. Xafiiska iibiyuhu inta badan waa midab diiran oo dhalaalaya iyo midab dhexdhexaad ah. Waxaa lagu talinayaa in la doorto midabka aasaasiga ah ee birta ah, aluminium aluminium midabka aasaasiga ah, daah birta cawl khafiif ah ama mesh qurxinta wareegsan. Midabka leh dhalaal sare wuxuu u muuqdaa mid dhalaalaya oo nadiif ah. Haddii midabka midabku aanu fiicnayn, boosku wuxuu noqon doonaa mid fool xun. Sidaa darteed, dadka caadiga ah ayaa weli ku dhiirran inay isku dayaan midabyo gaar ah. Cadaan ayaa ugu ammaansan. Madow + caddaanku waxay abuuri karaan saameyn muuqaal oo xooggan. Gray wuxuu u dhexeeyaa madow iyo caddaan, kaas oo fududeynaya khilaafka muuqaalka ah ee u dhexeeya labada. Ku shaqeynta jawigan muddo dheer waxay ka dhigi doontaa shaqaalaha nidaam macquul ah, xirfad iyo masuuliyad.